ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေမြင့််စေသော အရာများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ဆီးချိုသွေးချို » ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေမြင့််စေသော အရာများ
ဆီးချိုဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေတဲ့ အကြောင်းအရာများစွာ ရှိပါတယ်။ သင့်ဆီမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ သိရအောင် အောက်ပါအချက်တွေကို မှတ်သားဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား (၁) ဆီးချိုရောဂါ
သုတေသနပြုချက်များအရ အမျိုးအစား (၁) ဆီးချိုရောဂါ အကြောင်းကို တိကျစွာမသိရပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိပါတယ်။
မိသားစုရာဇ၀င်။ သင့်ရဲ့ မိဘနဲ့ မွေးချင်းတွေမှာရှိရင် သင့်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်း။ မိမိကိုယ်ကို တိုက်ထုတ်တဲ့ ခုခံပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းမှာတော့ သူတို့ကြောင့် ဆီးချို မဖြစ်တတ်ပါဘူး။
စားသောက်မှုပုံစံ။ နွားနို့ကို စောစီးစွာ စသောက်ဖူးခြင်း၊ ဗီတာမင်ဒီ စားသုံးမှု နည်းခြင်း၊ အသက်လေးလမတိုင်မီ အစေ့အဆန်များ ကျွေးခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာ အမျိုးအစား (၁) ဆီးချိုနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေကြောင်း မသိနိုင်ပါဘူး။
ပထ၀ီအကြောင်းအရာ။ ဖင်လန်၊ ဆွီဒင် စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်ပါတယ်။
ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို
အချို့အကြောင်းအရာတွေဟာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း။ လှုပ်ရှားမှုနည်းလေ၊ အဖြစ်များလေပါပဲ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့၊ ဂလူးကို့စ်ကို စွမ်းအင်အနေနဲ့ ရယူဖို့၊ သင့်ရဲ့ဆဲလ်တွေဟာ အင်ဆူလင်ကို ပိုပြီးအာရုံခံမိစေဖို့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုရာဇ၀င်။ သင့်ရဲ့မိဘနဲ့ မွေးချင်းတွေမှာ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဖြစ်ရင် သင့်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
လူမျိုးစု။ ဟစ်ပန်းနစ်၊ အမေရိကန် အင်ဒီးယန်း၊ အာရှ အမေရိကန် တွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ အကြောင်းရင်းတော့ သေချာမသိသေးပါဘူး။
အသက်အရွယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလာပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဟာ ကလေးများ၊ အရွယ်ရောက်ခါစ လူငယ်များမှာ ဖြစ်တာ များတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဆီးချိုဖြစ်ခြင်း။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာ ဆီးချိုဖြစ်ရင် နောင်မှာ ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်လာတတ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်တတ်သော Polycystic ovary syndrome ရောဂါ
သွေးတိုးခြင်း။ သွေးပေါင်ချိန် ၁၄၀/၉၀ နဲ့ အထက်ကို တက်ခြင်းဟာ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
ပုံမှန်မဟုတ်သော ကိုယ်လက်စထရောနှင့် triglyceride မြင့်တက်ခြင်း
အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆီးချိုဖြစ်တတ်ပေမယ့် အချို့အမျိုးသမီးများဟာ သူများတွေထက် ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်တက်စေပါတယ်။
အသက်အရွယ်။ ၂၅ နှစ်ထက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ ကိုယ်အလေးချိန်များတာဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။
မိသားစုနှင့် မိမိရာဇ၀င်။ မိဘများ၊ မွေးချင်းများမှာ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို ဖြစ်တာရှိရင် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ယခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ချိန်မှာ ဆီးချိုဖြစ်ဖူးရင်၊ ကလေးကြီးကြီးမွေးဖူးရင် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
လူမျိုး။ လူမည်း၊ ဟစ်ပန်းနစ်၊ အမေရိကန် အင်ဒီးယန်း၊ အမေရိကန် အာရှတို့မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ အကြောင်းရင်းတော့ သေချာမသိရပါဘူး။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတျ 11, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတျ 11, 2017
What Increases My Risk of Diabetes?. http://www.webmd.com/diabetes/guide/risk-factors- for-diabetes#1.
Accessed January7th , 2017.
Diabetes Risk Factors. http://www.diabetes.co.uk/Diabetes-Risk- factors.html. Accessed January7th , 2017
ကျားဟော်မုန်းနှင့် အမျိုးသားများ ထိပ်ပြောင်ခြင်း ဆက်စပ်မှုရှိလား
ဒီလောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေတာတောင် ကိုယ်အလေးချိန်က တိုးနေတုန်းလား ။ ။
ဆီးချိုထိန်းတဲ့အခါ တလွဲမှတ်ကြတဲ့ အမှားတချို့
ကလေးကို ဗီတာမင် D မချို့တဲ့စေဖို့
သင့်ကလေးကို ကြင်နာစွာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါ